Xarigga Ronaldinho iyo walaalkii - Somgoal
Home video Xarigga Ronaldinho iyo walaalkii
Ronaldinho waxaa laga siidaayay xabsiga, waxaana la geliyay xabsi guri. Wuxuu weli u xiran yahay dowladda Paraguay. Laacibkan oo sannadkii 2005 ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or wuxuu waqti ku qaatay xabsi, waxaana la xiran walaalkiisa.
Labadoodaba waxaa la xiray 6 March, waxayna ku eedeysan yihiin isticmaalka baasaboorro been abuur ah.
Labadan walaalaha ah waxaa horey loogu diiday in racfaan lagu sii daayo balse waxaa laga qaaday $800,000 mid kasta, ayna ku sugnaadaan hoteel ku yaalla Asuncion muddada ay socoto dacwadooda.
Previous articleKubadda Cagta ee Ingiriiska iyo Yurub oo la hakiyay
Next articleBundesligaha jarmalka oo dib u furmaya 16 ka may.